အသက် ၂၃ - (ED) ၃ လနှင့်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခြင်း - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌ပေါက်သည်
အသက် ၂၃ - (၃) လနှင့် ဆက်လက်၍ ထမ်းဆောင်သည်
ငါသုံးနှစ်တာရှည်သောဆက်ဆံရေးတွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၃ နှစ်ရှိပြီဖြစ်သော porn, masturbation စသည်တို့နှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်ဘဝ၏နောက်ဆုံး ၃ လကိုမျှဝေချင်သည်။ သို့သော်လွန်ခဲ့သော ၃ လခန့်ကတွေ့ရှိခဲ့သည့်အတိုင်း ( ဒီနှင့်အခြားဆိုဒ်များကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဟာအချိန်ကြာမြင့်စွာကတည်းကစွဲလမ်းခဲ့ဖူးတယ်။
porn ကြည့်တာပုံမှန်ပဲလို့အမြဲထင်ခဲ့တယ်။ လူတိုင်းကလုပ်ကြတယ်၊ တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းကိုလည်းပုံမှန်လို့သတ်မှတ်ခဲ့တယ်၊ ဒါကငါ့ဘဝမှာပြproblemsနာဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်။ အစတွင်ကျွန်ုပ်သည်ပုံမှန် porn ကိုသာကြည့်ခဲ့သည်၊ စက်ဆုပ်ရွံရှာဖွယ်ဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်တစ်စုံတစ်ရာဖြစ်ပျက်ခဲ့သည့် အချိန်မှစ၍ hardcore ပစ္စည်းများကိုပင်မကြည့်ခဲ့ပါ။ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးလိင်ဆက်ဆံမှုကိုတွေ့ကြုံခဲ့ဖူးသော်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့ပါ။ ၎င်းသည်အရက်ကိုအပြစ်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက ၃ ကြိမ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ငါကောလိပ်တက်တော့အချိန်တုန်းက porn ဟာအိုကေတယ်လို့ထင်နေတုန်းပဲ။ ငါကြည့်လေ့ရှိတဲ့ porn အမျိုးအစားဟာပြောင်းလဲသွားပြီး၊ ငါကြည့်တဲ့တစ်ခုတည်းသော porn က bi / transessual porn မရောက်ခင်အထိတဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်ဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ပါဘူး။ တစ်ခါတလေကျွန်မရဲ့လိင်တူချင်းလက်ထပ်ခြင်းကိုတောင်သံသယ ၀ င်မိတယ်။
တစ်နေရာရာကဒီအကြားငါမိန်းကလေးတစ်ဦးကိုတွေ့စုံတွဲတစ်တွဲဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်နှင့်အစဉ်အဆက်ကတည်းကအတူတကွခဲ့။ ၏သင်တန်း, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမအောင်မြင်မှုများအစအဦး၌အလွန်ဘုံရှိကြ၏။ စိုက်ထူပြဿနာများကိုပထမဦးဆုံးမှာ, ထို့နောက်အချိန်မတန်မီသုက်လွှတ်, တခါတရံတွင်ပင်သုတ်ရည်လွှတ်နှောင့်နှေး။ ဒီပြဿနာတွေကိုလာနှင့်သွားပြီ, ငါတကယ်အကြောင်းရင်းဘာထင်ဖူးဘူး။ တခါတရံငါ, ကျောင်း / အလုပ် related စိတ်ဖိစီးမှုပေါ်မှာအပြစ်တင်မောပန်းခြင်းနဲ့ကျွန်မတောင်မှငါ့အ gf ရုံငါ့ကိုဆွဲဆောင်ရပ်တန့်ကြောင်းယူဆခဲ့ကြသည်။ အခုတော့ငါကသူ့ကိုဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုကြံ့ကြံ့ခံဆဲငါ့အားဖြင့်ရပ်တည်ရှိသည်ဖြစ်ကြောင်းကိုဘယ်လိုကံကောင်းနားလည်သဘောပေါက်။
ဒါပေမယ့်အချက်ရဖို့။ လိင်မှုကိစ္စအပေါ်လိင်၏လွှမ်းမိုးမှုနှင့်ပတ်သက်သည့်ဆောင်းပါးအနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်အများစုတွေ့ခဲ့ရပြီ။ ငါခဏစဉ်းစားမိပြီး၊ ငါဟာအချိန်ကြာကြာအတူတကွပေါင်းသင်းနေချိန်မှာကျွန်မရဲ့လိင်မှုဘ ၀ ဟာအမြဲတမ်းပိုကောင်းလာတယ်၊ ငါပုံမှန်အားဖြင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုမကြည့်ခဲ့ဘူးဆိုတာသဘောပေါက်ခဲ့တယ် ဖိုရမ်များကိုလှည့်လည်ကြည့်ရှုပြီးတဲ့နောက်ဆောင်းပါးတိုင်းနီးပါးကိုဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်မဟာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းကိုရပ်တန့်ဖို့လိုတော့တယ်။
ငါဒါလုပ်ခဲ့တယ်။ လွန်ခဲ့သော ၁၄ ပတ်က
ပထမ ၂ ပတ်ကတော့ကြောက်စရာကောင်းတယ် အိပ်လို့မရဘူး တကယ်ပဲ၊ ၄ ရက် ၅ ရက်လောက်မအိပ်မနေသတိရမိတယ်။ ငါရူးသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်ခဲ့တယ် ငါ့ခေါင်းကပေါက်ကွဲတော့မယ်။ ထို့နောက်အပြားသည် ၂ ပတ်၊ ၃ ပတ်ခန့်ကြာသည်။ ငါရှက်ကြောက်ခြင်း၊ ငါ့ကိုလူတစ်ယောက်ဖြစ်စေတဲ့တစ်ခုတည်းသောအရာကအလုပ်မလုပ်ဘူး။ နံနက်တောအုပ်မရှိဘူး ဘာမှမစိတ်ဝင်စားပါဘူး ကံကောင်းတာကကျွန်မရဲ့ GF ကိုတစ်လနီးပါးလောက်မတွေ့ခဲ့ရလို့သူမရဲ့ဘွဲ့ရစာမေးပွဲအတွက်စာသင်နေလို့ကျွန်မတို့လိင်ဆက်ဆံမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုမစဉ်းစားခဲ့မိဘူး။
အကြောင်းကို 5-6 ရက်သတ္တပတ်ပြီးနောက်, ငါ့နံနက်သစ်သားပြန်ရောက်လာတယ်။ တကယ့်ကယ်ဆယ်ရေးစခန်း။ ကျွန်မတစ်နေ့တာအတွင်းငါ့အသက်ကိုရဲ့အကောင်းဆုံးစိုက်ထူရှိခြင်းစတင်။ တစ်ခါတစ်ရံလျော့နည်းတစ်ခါတစ်ရံပို, ဒါပေမယ့်ငါလက်ျာဘက်လမ်းကြောင်းအပေါ်ဖြစ်ခဲ့သည်တစ်ဦးခံစားချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့နောက်စာမေးပွဲအပြီးကျနော်တို့နောက်ဆုံးတော့လိင်, ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာအတွက်အကောင်းဆုံးများထဲမှရှိခဲ့ပါတယ်။ အဘယ်သူမျှမစိုက်ထူပြဿနာများ, အဘယ်သူမျှမ PE ။ ငါ Hercules နဲ့တူသလိုခံစားရတယ်ငါလုပ်နေတာဘာအတွက်ပေါ်သယ်ဆောင်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။
ငါ porn သုံးလနီးပါးမကြည့်ရသေး
အကြိမ်အနည်းငယ် masturbated, ဒါပေမယ့်အစဉ်ငါ့ gf စဉ်းစား
တစ်ခါတစ်ရံတွင်ငါ၏အစိုက်ထူ 100% မဟုတ်ပါဘူးနှင့်တခါတရံတွင်ငါမိနစ်စုံတွဲတစ်တွဲအတွက်သကဲ့သို့လျင်မြန်လာပေမယ့်ငါသော proccess ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်သည်ခန့်မှန်း
ငါမင့်ကျနော်တို့ရှိခြင်းဖြစ်ကြောင်းခန္ဓာကိုယ်သို့မဟုတ်လိင်အဘို့, တဖန်ငါ့ gf တန်ဖိုးထားပေမယ့်တစ်နည်းနည်းနဲ့ပဲရူပဗေဒမှကြှနျုပျတို့ရဲ့ဆကျဆံရေးကိုကန့်သတ်ရပ်တန့်ခြင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှုထောင့်အဘို့ကိုပိုဂရုစိုက်
ငါမှာစွမ်းအင်ပိုတယ်လို့ငါမပြောနိုင်ဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါမှာအဲဒီလိုမရှိခဲ့ဘူး၊ ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်ဖို့လှုံ့ဆော်ခံခဲ့ရတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်နေတယ်၊ ​​ငါ့ရဲ့စွဲလမ်းမှုကိုရပ်တန့်ဖို့၊ အစစ်အမှန်မဟုတ်တဲ့အရာ၊
ငါ့ခရီးမပြီးသေးဘူးကိုငါသိတယ် တစ်ခါတလေတွန်းအားတွေရှိနေတုန်းပဲ။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်အဘို့အအားရစရာအဖြစ်ကဖွင့်ရန်။ ဒါကစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ် pornmale သော ...
ငါလိင်ရေရှည်တည်တံ့သောသူတို့သည်ဝက်အသကျရှငျစိုက်ထူခြင်းနှင့် 1 မိနစ်မှပြန်သွားလေ၏ အကယ်. ထိုအခါမူကားငါပါလိမ့်မယ်ဘယ်လောက်မိုက်မဲနားလည်သဘောပေါက်
အဘယ်အရာကိုလဲလှယ်အတွက်?f* အခြား3လကြာငါ့ကိုချီ CK မယ်လို့ငါ့ဦးခေါင်းသည်ခုနှစ် dopamine ၏လက်ငင်းအလုအယက်?
ဒါဟာတွေအများကြီးသို့မဟုတ်ပဲနည်းနည်းကကူညီပေးခဲ့လျှင်ကျွန်မမသိရပါဘူးသော်လည်းအစားအစာ, ငါသညျငါ့အစားအသောက်များတွင်ပြောင်းလဲသွားတယ် porn ကြည့်ရှုရပ်တန့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်မှီ, ငါဒိုင်ယာရီအစာစားခြင်းရပ်တန့်, လျော့ချအမဲသားကိုစားသုံးမှု, သစ်သီးများနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်အများကြီးမစားစတင်ခဲ့ပြီးအများစုအော်ဂဲနစ် ငါလုံးဝကို restart နဲ့ငါ့ဦးနှောက်ကိုကူညီဖြည့်စွက်အဖြစ် chlorella နှင့်အိုမီဂါဆီဆက်ပြောသည်အကြာတွင် junk အစားအစာကိုပယ်ဖြတ်လ
ငါသည်လည်းညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုံးသည်စစ်မှန်သောမဟုတ်ကြောင်း၊ အမျိုးသမီးများ၊ လုပ်ရပ်များ၊ ၎င်းမှခံစားချက်များကို…သဘောပေါက်လိုက်ပြီ၊ ၎င်းသည်တွစ်တာအတုအတုများ၊ မိတ်ကပ်၊ အခြေအနေအတုများ၊ ဆက်ဆံရေးများ၊ , အတု penises စသည်တို့ဟုတ်ပါတယ်, မိန်းမများအစစ်အမှန်ဘဝထက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောကြည့်ရှုစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်သူတို့ကများအတွက်ပေးဆောင်သရုပ်ဆောင်တွေကြောင့်သာ။ သူတို့အလုပ်ပဲ။
ပြီးတော့ငါတခြားသူတွေလိင်ဆက်ဆံတာကိုမကြည့်ချင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ် ငါကခံစားတဖြစ်ချင်! ရုပ်ရှင်မှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေမဟုတ်ဘဲတကယ့်အပေးအယူလုပ်ခြင်းဖြစ်တယ်။
ဒီတော့ဒါကငါ့ဇာတ်လမ်းပဲ။ ငါမပြီးသေးဘူးဆိုတာငါသိတယ်၊ ငါချက်ချင်းကျေနပ်ရောင့်ရဲစေမယ့်နည်းလမ်းတစ်ခုကျန်နေသေးတယ်ဆိုတာငါသိတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကသူ့ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ကိုမပေးတော့ဘူး။
LINK -3လနှင့်ပေါ်တင်ဆောင်